Man City Oo U Weecatay Lewandowski Kaddib Markii 100 Milyan Oo Kane Ah Lagasoo Diiday – Garsoore Sports
Kooxda Manchester City ayaa dareenkeeda u weecisay weeraryahanka Bayern Munich Robert Lewandowski kaddib markii ay arkeen in dalab 100 milyan oo ginni oo ay ka gudbiyeen weeraryahanka Tottenham Harry Kane laga soo diiday.
Kane, oo 28 jir ah, ayaa doonaya inuu u dhaqaaqo Etihad Stadium kaddib markii uu dhammaadkii xilli ciyaareedkii hore uu carabka ku dhuftay inuu doonayo inuu ka tago Spurs si uu koobab hanto.
Pep Guardiola ayaa taageere weyn u ah kabtanka Ingiriiska, City ayaana diyaar u ah inay jabiso rikoorkeeda suuqa kala iibsiga si ay ula soo saxiixato Kane.
Si kastaba ha noqotee, dalabkii furitaanka ee City ee ku dhowaad 100 milyan oo ginni ahaa oo ay xiddigan ku doonayeen ayaa isla markiiba lagasoo diiday, Spurs-na wax niyad ah uma heysato inay dhageysato dalabyada weeraryahankan iyadoo xiddigan uu heysto qandaraas seddex sano oo uu ku sii joogi karo kooxda ka dhisan Waqooyiga London.
Inkastoo City ay ka warqabto rabitaanka Kane ee ah inuu usoo dhaqaaqo dhankooda, haddana waxay ogyihiin in heshiis kasta oo weeraryahankan lagu doonayo ay tahay in lala soo baxayo lacag aad u fara badan.
Wargayska Daily Mail ayaa sidaas darteed sheegaya in City ay haatan indhaha ku heyso inay u dhaqaaqdo kabtanka Poland Roberto Lewandowski, taasoo haddii ay suuragasho ay ka dhignaaneeysa in weeraryahankan uu la midoobi doono macalinkiisii hore ee Josep Guardiola.
Guardiola ayaa soo maamulay Lewandowski intii lagu jiray seddexdii sano ee uu joogay Bayern Munich, City ayaana heegan ku aaddan xaaladiisa la geliyay madaama uu heysto kaliya labo sano oo heshiiskiisa Bavaria ah.
Inkastoo Bayern ay dooneyso inay sii heysato xiddigeeda, haddana waa 32 jir wuxuuna doonayaa heshiis waqti dheer ah oo ka hor-imaanaya siyaasadda qandaraaska kooxda.
Waxay ka baqayaan in Lewandowski uu riixi karo inuu baxo xagaaga soo aaddan haddii uusan saxiixin heshiis cusub, waqtigaas oo lagu heli doono qiimo yar marka loo fiiriyo inuu kaliya hal sano uga harsan yahay qandaraaskiisa.
City ayaa sidaas darteed dooneysa inay tijaabiso arrintaas, inkastoo ay u badan tahay inay xiddigii hore ee Dortmund ay ku heli karaan ku dhowaad 70 milyan oo yuuro.
Chelsea Oo Lagasoo Diiday Dalabkii Ugu Horreeyay Ay Ka Gudbiyeen Haaland